Burma Strange News (Burmese Version): ၆၃ နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့(၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်)
၆၃ နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့(၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်)
ပထမဆုံး မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်း (Source: ယူကျု)
ဒီတိုင်းပြည်ဟာ လွတ်လပ်ပင် လွတ်လပ်သော်ငြားလည်း .... ဖာသည်တိုင်းပြည် ဖြစ်နေမှာပဲ
(အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၊ ၁၃-၇-၁၉၄၇)
(Video Sources: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်း & ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သီချင်း)
ပြည်ထောင်စု သမတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် .. စသည်ဖြင့် အမည်အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်လာတဲ့ မြန်မာပြည် ဟာ နယ်ချဲ့ ဗြိတိသျှ လက်အောက်က နေ ၁၉၄၈ ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက် နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ (4:20 AM) မှာ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေး ယူတဲ့အခါ ဗေဒင်ကိန်းခန်းအရ တွက်ချက် ရယူခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး ဗြဟ္မဏ ပုဏ္ဏားက 4:20 (ဖိုးတွမ်တီး) လို့ အချိန် မှားယွင်းစွာ လွတ်လပ်ရေး အခါတော် ပေးခဲ့တဲ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံး နိုင်ငံခေါင်းဆောင်က စပြီး အောက်ခြေ အစိုးရ အရာရှိတွေအထိ အကုန်လုံး နိုင်ငံ့ ဘဏ္ဍာကို ခိုးယူကြတဲ့ ဖိုးတွမ်တီး သူခိုးကြီး (ပုဒ်မ ၄၂၀၊ သူခိုးပုဒ်မ) တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ လူအများက ပြောစမှတ် ပြုကြပါတယ်။ (ဥပမာ- ဒီမှာကြည့်ပါ)
ဒါကြောင့်မို့လို့လဲ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခါစက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆန်စပါး အများဆုံး တင်ပို့တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သလို၊ အရှေ့တောင်အာရှမှာလဲ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး လီကွမ်ယူးတို့ရဲ့ မော်ဖူးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ယခုအခါမှာတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ ဆိုမာလီယာ နိုင်ငံထက်တေင် ဆင်းရဲ မွဲတေတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်လို့ နေပါပြီ။
အပေါ်က နှိုင်းယှဉ်ချက် နဲ့ ဒီ ယူကျု ဗီဒီယိုကလစ်ကို ကြည့်ရင်
အာရှအဆင်းရဲ ဆုံး ငါးနိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာပြည် ပါဝင်တာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ﻿
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထက်တောင် ပိုမို ဆင်းရဲပြီး တစ်ဦးချင်း ၀င်ငွေ (GDP per Capita/ PPP)လျော့နည်းတာကို တွေ့ရမှာပါ၊ (တိုင်းပြည်က အဲသလောက်ထိ ရှက်စရာ ကောင်းနေပါပြီ)
ဒီလို အခြေအနေမျိုး မရောက်ပါစေနဲ့ လိုပဲ မျှော်လင့်ကြရမယ့် အနေအထားပါ .....
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သူ့ရဲ့ မကွယ်လွန်မီ နောက်ဆုံး မိန့်ခွန်းထဲမှာ .. သူများ နိုင်ငံတွေက၊ တခြားလွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေက ခြေလှမ်းတလှမ်းလှမ်းရင်.. ကျုပ်တို့က ခြေလှမ်း ဆယ်လှမ်း လှမ်းနိုင်မှ နောက် ဆယ်နှစ် အနှစ် ၂၀ တန်သည်အားဖြင့် တန်းတူ ညီတူ ဖြစ်သွားမယ်...
တန်းတူ ညီတူ မဖြစ်သမျှ ကာလပတ်လုံး ဒီတိုင်းပြည်ကြီးက လွတ်လပ်တယ် ဆိုပေမဲ့ ဟိုလူ့ မြင်လဲ မြင်ရတဲ့ အခါ မျက်နှာချိုသွေးရ .. ဒီလူ့လဲပဲ မြင်ရတဲ့အခါ မျက်နှာချိုသွေးရ၊ ဖာသည် လို တိုင်းပြည် ဖြစ်နေမှာပဲ... လို့ နောက်ဆုံး မှာကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလို နိုင်ငံမျိုးဆီမှာတောင်ကျွန်ခံရမယ့် အခြေအနေ ဟိုဒင်းခံရမယ့် အနေအထားမျိုး ရောက်နေပါပြီ ..........
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုး ဘယ်လောက် အောက်ကျကျ၊ ဘာတစ်ခုမှ ဂရု မစိုက်ဘဲ ကိုယ်ကောင်းစားရေးကိုသာ ကြည့်ရှုသူ လူတစ်စုကြောင့် မြန်မာပြည်ဟာ ဘယ်လို နိုင်ငံအဆင့်အတန်းမျိုး ဖြစ်နေပြီလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ အောက်ပါ ဗီဒီယို ကလစ်မှာ ကြည့်ရှု နိုင်ကြပါတယ်။
(Source: Al Jerzeera)﻿
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့သလို ...
﻿ဗီဒီယို ဖိုင် မပါဘဲ ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းဖြင့်သာ ကြည့်လိုသူများ အတွက်
Posted by BS News at 2:46 AM
Anonymous January 6, 2011 at 8:18 PM
we r aiming for this.. :D..
ပေးထားသည့် မှတ်ချက်များကို မကြာမီတင်ပေးပါမည်။ ခေတ္တ စောင့်ဆိုင်းပါ။
(၁) တင်ထားသည့်ပို့စ်များနှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိသည့် အကြောင်းအရာများ ဖြစ်နေလျှင် သော်လည်းကောင်း၊
(၂) လူအများ လက်မခံနိုင် လောက်သည့် ရိုင်းစိုင်း ကြမ်းတမ်းမှုများ ပါဝင်နေလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ပယ်ဖျက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တင်ပေးခြင်း မတင်ပေးခြင်းသည် ကာလ၊ ဒေသ၊ ပယောဂ၊ လူမျိုးရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ဘာသာရေး၊ တသီးပုဂ္ဂလ ယုံကြည်မှုအပေါ် သတ်မှတ် ခွဲခြားမှု မရှိပါ။ စာဖတ်သူ လူအများကို လေးစားသော အားဖြင့် အထက်ပါ အချက် နှစ်ခုကို ရှောင်ကြဉ် ရေးသားလာသော မည်သည့် ဝေဖန် အကြံပြု ပြောဆိုမှုမျိုးကို မဆို တင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ အချို့မှတ်ချက်များကို အများပြည်သူ အကျိုးငှာ လိုအပ်ပါက တည်းဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
BSNews on Facebook
သတင်းထူးလေးတွေ ရှိရင် ဇီးကွက်မျက်ပြူးဆီဆက်သွယ်ပါ mmcrazyjoker1@gmail.com
Search with Owl's Eyes
ကုန်း-ရေ နှစ်သွယ်သွားယာဉ်နှင့် နှစ်ထပ်ကားများကိုြ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် "သမ္မတ" ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်
နေတိုး အကယ်ဒမီရတဲ့အတွက် လူတွေကို အသက် ကယ်နိုင်ပြီ
Burma Strange News ဘလော့ ရပ်တန့်
လွှတ်တော်အတွင်း အမတ်များအားလုံး နှာခေါင်းပိတ်ထားကြရ...
တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ခေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်
ကျွဲနွားများကို ဆိုင်ကယ်အစား စီးနင်းမောင်းနှင်လျက်...
လွှတ်တော်အတွင်း ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အိပ်မငိုက်ရ
ပါတီတစ်ခုက နိုင်ငံရေးသမားများကို အမျိုးအစားခွဲခြား...
နေပြည်တော် အကယ်ဒမီပေးပွဲသို့ ဂြိုဟ်သားများရောက်ရှိ...
မြန်မာမော်ဒယ်ဂဲနှစ်ဦး မျက်နှာသစ်သဖြင့် လေဖြတ်သွား...
ရွှေတိဂုံ ဂေါပကများ တမလွန်လောကမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ...
မီးလောင်လျှင် ထွက်မပြေးဘဲ အသေခံပါ
စစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဖိုးသူတော်အဖွဲ့ချုပ်ကေ...
မြန်မာအမျိုးသားအချို့ မကြာမီ လိင်ပြောင်းရန်စိတ်ကူး...
HIV လူနာများကို မဖြူဖြူသင်း လက်မခံတော့ဟု သိရ
မြန်မာပြည်တွင် မကြာမီတပ်ဆင်မည့် ATM စက်များတွင် မူ...
ကား ... ပြ ... ပွဲ
My Name is တမတ်သား
သင်္ဘောများ ကုန်းမြေပေါ်တွင် ခုတ်မောင်းနိုင်ပြီ
အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲသို့ ဂေါ်ဇီလာများ တက်ရောက်
အကယ်ဒမီ ပေးပွဲတွင် လက်ကိုင်ဖုန်း မသုံးရ
မြန်မာပြည်သို့ တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသည့် အမေရိကန် လင်...
အမျိုးသားများကို ဝှေးသင်းမည်ဟု အိုက်စလန် အမျိုးသမီ...
အချိတ်ထမီ ဒီဇိုင်းသစ်များ ရက်လုပ်လျက်ရှိ
တိုက်ဆောက်ရာတွင် ဘိလပ်မြေပမာဏထက် သဲပမာဏ ပိုများ
အမတ်မင်းများ လွှတ်တော်သို့ ကိုယ်လုံးတီးတက်ရောက်ကြရမ...
ပညာဒါနကျောင်းများ ဖွင့်ခွင့်မပြု၊ ဇိမ်ခန်းများ ဖွင...
ယာဉ်တိုက်မှုကင်းမဲ့ဇုန်၌ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခြင်း ...
သက်မွန်မြင့် မှော်ဆေးသောက်သဖြင့် နာရီ၊ လက်စွပ်တို့...
မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များ လုံခြုံစွာ ၀တ်ဆင်ရမည်ကို မ...
မြန်မာမိကျောင်းတကောင် အမေရိကန်တွင် ခိုလှုံခွင့် ရရ...
တို့အလံ သင်ခန်းစာ ဖြတ်ညှပ်ကပ် သင်ကြားမည်
ရန်ကုန်မြို့ ၂၉လမ်း(အောက်)ရှိ တိုက်တလုံး နံရံပြိုက...
လွှတ်တော်တက် အမတ်မင်းအားလုံး အမတ်ကြီးဝတ်စုံများ ၀တ်...
Twitter သည် မြန်မာစကားဖြစ်ပြီး၊ Twitter တည်ထောင်သူ...
ရန်ကုန်မြို့တွင် Night ကလပ်များပိတ်၊ Dayကလပ်များဖွ...
တောင်ကိုးရီးယား အရာရှိတဦး အကြားအမြင်ရ
ယာဉ်စီးသူများ ပုဆိုးမကျွတ်စေရန် ခါးပတ်ဥပဒေ ပြဌာန်း...
Wireless လျှပ်စစ်မီတာများ တပ်ဆင်တော့မည်
လင်္ကာဒီပ အမတ်ကြီးက တမ္ပဒီပတိုင်းမှ ရောင်စုံဆင်များရှ...
ထူးဆန်းသော ပို့စ်မော်ဒန် အကသင်တန်းကြီး
၂၀၁၁ နှစ်ဦး အပေါက်ဆုံး တေးစီးရီး
မာမွတ် ဆင်ဖြူတော်များ ထုတ်လုပ်မည်
စစ်ကိုင်းတောင်ကြီး လေးဘက်ထောက် လမ်းလျှောက်နေခြင်း
မိခင်ဗိုက်ထဲက ကလေး ရေကူးနိုင်ပြီဟုဆို
ဘုရားပွဲတွင် လောင်းကစားဝိုင်းများ ပါရှိရေး အထူးအလေ...
ထမင်းဝိုင်းမှာ ငရုပ်သီးမပါလို့ ဇနီးကို ထင်းချောင်း...
မြန်မာ့ အရန်တပ်မတော်တွင် တစ္ဆေ သရဲများ စစ်မှုထမ်းကြမ...
လုံခြုံစွာ မ၀တ်ဆင်သဖြင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခဲ့ဟု ရ...
မြန်မာ့ တပ်မတော်မှ ဇီဝ လက်နက်များ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိ
ပါရမီ ယာဉ်လိုင်း အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်
မထသ မှ သင်တန်းသားသစ်များ ခေါ်ယူ
မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Facebook စာမျက်နှာများ အားလုံး ...
စကား ပြောတတ်သည့် မိုင်းဗုံး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထုတ်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ဈေးကောင်း...
နေရွှေသွေးအောင် စစ်မှုထမ်းရန် မလိုသေး
စစ်မှုထမ်းခြင်း ဥပဒေကြောင့် မင်းသမီးအချို့ ယောက်ျား...
ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်နေ့ လွှတ်တော်ခေါ်မည်
မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ခရီးသွား ပြည်သူများထံမှ ဓာြး...
သက်တမ်းလွန် အစားအစာများကို စူပါမားကက်များတွင်ရောင်...
၂၀၁၀ တွင် ဈေးကြီးများ အလှည့်ကျ မီးလောင်မှု ဖြစ်ခဲ့၊...
အိန္ဒြာကျော်ဇင်က မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲလာသူများကို လျှာထုတ်...
City FM က ဆုပေးသဖြင့် အေသင်ချိုဆွေ ပေါက်ကွဲ
စိုးမြတ်သူဇာ ကတုံး တုံးပြီ
မြန်မာလူမျိုး ဂစ်ဘွန်း မျောက်ကလေးတစ်ကောင် ချီဂါကို...
ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး အင်တာနက် Speed မြန်မာပြည်တွင် အကောင...
မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး မဖြစ်မနေ စစ်မှုထမ...
ချင်းပြည်နယ် ကြွက်ဘေး ချင်းအမျိုးသားပါတီ ဆွေးနွေးမ...
မောင်းသူမဲ့ လင်းတငှက် တစ်ကောင် ဖမ်းမိ
အလွန်ပြင်းထန်သည့် အအေးလှိုင်းဖြတ်သန်းမှုကြောင့် မို...
ငရဲမင်းကြီး၏ ပင့်တင်မှုကြောင့် ပင်လယ်ရေပြင်ထဲမှ ကျေ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ရွာ အသီးသီးတွင် ငယ်ရွယ်သူ အမျိ...
အချိန်ကာလများ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း
Apple ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာပြည်တွင် စူပါကွန်ပျူတာများတပ်...
အကောင်းဆုံး မြန်မာ သီချင်း
လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်က သတင်း
ယနေ့ ဆင်ကျားပူ ပင်နီ-ဆူးလား ဘွတ်ကီးဒိုင်ဈေးကွက်အေ...
၁ ပတ်ပြတ် လွှတ်တော်အမတ် သင်တန်းကြီး
အိမ်သာတက်လျှင် စာပေစိစစ်ရေး၏ ခွင့်ပြုချက် လိုမည်
မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး နေ့
"ရာထူးကြီးလေ လူတွေ ပိုလို့ ဥာဏ်တုံးလေ" ဟု သုတေသနတစ...
မင်းသားကြီး အာနိုး ရွှေဝါဇနက္က - ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး...
လျှပ်စစ်မီးကို အပ်ချလောင်း လုပ်ချင်သူ
ငပိ ဖြစ်သွားတဲ့ ငါ ...
BS News Reporter
ဤဆိုက်ရှိ သတင်းများအား Burma Strange News ကို ရည်ညွှန်းပြီး လွတ်လပ်စွာ Share လုပ်နိုင်ပါသည်။. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.